မိုးခါး December 1, 2011 at 4:19 PM
ဟင်းး .. ဒုက္ခပါလားနော် .. တာဝန်လည်း မယူကြဘူး ..
အဖြူရောင်နတ်သမီး December 1, 2011 at 4:22 PM
အဲဒီလို နံပတ်မှားနှိပ်မိလို့ပါရမယ်ဆိုရင် မလွယ်ဘူးနော်..
နတ်သမီးတို့ဆီမှာကတော့ system ပြောင်းထားတယ်..
ကိုယ့်ရဲ့ကဒ် သူများလက်ထဲရောက်သွားလည်း ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး..
pass word ၄လုံးသိမှ အဲဒီကဒ်ထဲက ငွေကိုထုတ်ယူလို့ရမှာ။
အဲဒီလျှို့ဝှက်နံပါတ်၎ လုံးမသိလို့ကတော့ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။
မေသိမ့်သိမ့်ကျော် December 1, 2011 at 4:24 PM
ဖြစ်ဖူးတယ်မမ။ ချက်ချင်း ဖုန်းဆက်ပြီး ဖျက်ပစ်လိုက်ရတယ်။ Amount က နည်းနည်းလေးပဲမို့ ဘာမှတော့လုပ်မနေတော့ဘဲ ဘဏ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ကဒ်ကိုဖျက်သိမ်းခိုင်းလိုက်တယ်။ အသစ်ပြန်လဲပေးတယ်။ နံပါတ်အသစ်နဲ့ပေါ့။ Offline နဲ့ သုံးတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်မမ။ အရင်တုန်းက တစ်ခါ Offline နဲ့ သုံးဖူးတယ်။ ကိုယ့်ကတ်နဲ့ကိုယ်ပါပဲ။ အဲ့ဒီတုန်းက ပြဿနာတော့ မတက်ဖူးဘူး။
Aye Aye Sann December 1, 2011 at 4:27 PM
‎(စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ထိုင်ရာက မထပဲ စားပွဲထိုးကို Credit Card လေး လှမ်းပေးပြီး ပိုက်ဆံရှင်းတဲ့ အချိန်တွေမှာရော စိတ်ချရပါတော့မလား။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဖုန်းတွေတိုင်းမှာ ကင်မရာတွေ ပါနေကြတာ… ကိုယ့် ကဒ်ကို ယူသွားတုန်းမှာ ရှေ့ရော နောက်ပါ ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်ရင် အင်ဖေါ်မေးရှင်း အကုန်ပါသွားပြီ… တပျော်တပါး သုံးပါလေ့ပဲ…။)
သမီးက ခဏ ခဏ သွားစားတော့ အဲဒီကို တစ်ခါတစ်လေ တွေးမိတယ်... သတိပေးတာ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ် ချစ်မမ... ကဒ်တွေ တစ်ချို့ ပြန်အပ်လိုက်တော့မယ်..း)
Moon Lay December 1, 2011 at 4:27 PM
အဲ့ဒါကိုဟိုရက်ကတောင် စဉ်းစားမိသေးတယ်.. ခရက်ဒစ်ကဒ်ငှားပြီး စာမေးပွဲကြေးသွင်းတဲ့ကိစ္စ ဘာမှမလိုဘူး နံပါတ်၇ိုက်ထည့်ရုံပဲ.. ပြီး၇င် ဘီလ်ပဲပိုင်ရှင်ဆီကိုရောက်လာတာ.. ကိုယ်ငှားလိုက်တဲ့သူကမဟုတ်ပဲ သူကနေတဆင့် နံပါတ်ကိုမှတ်ထားပြီး တခြားသူတွေအဲလိုမျိုးများ သုံးလိုက်လို့ ကိုယ့်ဆီ ဘီလ်ပြန်ရောက်လာရင် ဘယ်လိုလိုက်မလဲလို့ စဉ်းစားနေမိတာ..
ချစ်ကြည်အေး December 1, 2011 at 4:29 PM
စိတ်ရှုပ်စရာကြီးပါလားးးး ဘာမှ မလုံခြုံတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ....။ တစ်ခုခုတော့ သေချာပေါက်လွဲနေပြီ။ နောက်ဆုံး ၃လုံး လုံး တူနိူင်ဖို့ ဆိုတာ....ဟူးးးးး
Mee Mee Sandar December 1, 2011 at 4:37 PM
မမ.. Citi bank က service မဆိုးဘူး ... ဘာပဲပြောပြော လုပ်ပေးတယ်.. ခုချိန်ထိပေါ့။ UOB ကတော့ ကြီးကျယ်လွန်းတယ်။
rose of sharon December 1, 2011 at 5:13 PM
အဲလိုကြီးကတော့ cashier ပေါ့ဆတာလည်းပါတာပေါ့... တကယ်တော့ အခုနောက်ပိုင်း ဟိုတယ်bill ရှင်းကြရင် pin code ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရိုက်ထည့်ပြီး မှန်မှ access ဖြစ်တာပါ... အဲဒီနေရာမှာသုံးတဲ့credit card system က out of date ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်... ပြန်ရမယ်ဆိုပေမဲ့ အလုပ်ရှုပ်သွားတဲ့အပြင် စိတ်လဲရှုတ်သွားရတာပေါ့း(
မဒမ်ကိုး December 1, 2011 at 5:18 PM
Nyi Linn Thit December 1, 2011 at 5:40 PM
ဒီလို အဖြစ်မျိုး တခါမှ မကြားဖူးဘူး..၊ ဒီအတိုင်းဆို မသက်ဝေ ပြောသလို မကောင်းသူထိပ်၊ ကောင်းသူထိပ် တွေ့ကရာ ဂဏန်း ၁၆ လုံး ရိုက်ထည့်ပြီး သုံးချင်သလို သုံးလို့ ရနေပြီပေါ့၊ ပြီးတော့ ပုံမှန်ဆို လက်နဲ့ မနှိပ်ဘဲ Card reader ထဲမှာ ဘားကုဒ်ကို ဆွဲဖြတ်ကြတာ မဟုတ်ဘူးလား၊ ဒီ အတွေ့အကြုံကို ဝေမျှပြီး သတိပေးတာ တကယ်ပဲ အဖိုးတန်ပါတယ်၊ ကဒ်သုံးတိုင်း သတိထားရတော့မယ်။
Phyo Maw December 1, 2011 at 5:52 PM
I've been thinking abt that lately too since last time I could could buy tickets without sign or pin at Cathay or gv using master card.
အလွမ်းပြေ December 1, 2011 at 6:20 PM
ဖြစ်ရလေ အစ်မရေ..ကျွန်မတို့ ဆီမှာလည်း ကတ်များပျောက်လို့ကတော့ ဘဏ်ထဲ ရှိသမျှ ပြောင်ပဲ..အချိန်မီရင်သာ သက်သာမယ်..
ps. လင့်လေး ချိတ်ပေးထားတာလည်း ကျေးဇူးပါနော် အစ်မ။
kiki December 1, 2011 at 6:21 PM
အဲ... နေရင်းထိုင်ရင်း အပိုဆုပေါက်တာပဲ မသက်ဝေ။ ကဒ်တွေများလေ.. မလုံခြုံ လေ ပါပဲ ..။
ဗမာပြည်မှာ လို ..၊ ရော့ နဂါး၊ ရော့ပတ္တမြား....
ငွေ ထုတ် ပုံ ပြီးရှင်းကြတာ ပဲ ကောင်းတယ် .... ( မှိုတက်နေတဲ့ ပိုက်ဆံ အနံ့ တွေ အောင့်သက်သက်ရှုပြီးတော့ ပေါ့ ..).
ဘေဘီ December 1, 2011 at 7:01 PM
ကျမရဲ့ ဘဏ်ကဒ်နဲ့ တခြား ပြည်နယ်တခုက
ဓါတ်ဆီဆိုင်ကနေ $ ၃၆၀ ထုတ်သွားတယ်
ဘဏ်ကို ဖုန်းဆက်တော့ ဘဏ်က သူတို့ရဲ့
Vista December 1, 2011 at 7:25 PM
Citi ပဲကောင်းတယ် တကျပ်က
စလို့ တနေရာရာကနေ သုံးလိုက်၊ ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ဖုန်းကို SMS လာတယ် ဒါမင်းသုံးတာမဟုတ်ရင် ခုချက်ချင်းဒီနံပါတ်ကိုဆက်ပါဆိုပီးတော့ပါတယ်။ DBS cards တွေကတော့ ဖျက်ပလိုက်တာကြာပေါ့။ဟိ။
TZA December 1, 2011 at 9:51 PM
ဟုတ်တယ်၊ ဗစ်စတာလိုပဲ စီးတီးကိုအားပေးတယ်။
Evy December 1, 2011 at 10:02 PM
စိတ်ပျက်စရာပါလား အစ်မသက်ဝေရေ။ အဲလိုတော့ မကြုံဖူးသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် တော်တော် သတိထားရတော့မယ်။ အတွေ့အကြုံကိုမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်။
David Aye Myat December 1, 2011 at 10:14 PM
It seems like there is another keyboard pattern on this blog. Can't help with Zawgyi.
Both the club and the bank that permitted the transaction to occur are quite irresponsible. There maybe another reason that we are Myanmar national with history and whenever something happened, we are the person who screwed.
I do understand that we don't have time to deal with the lawsuit on this case but I am sorry that that particular club will take advantage and continue these kind of illegal transactions to other credit cards.
This story is fu*king amazing and terribly depicts the accountability that the DBS bank is taking f*cking seriously for its Myanmar customer.
It deems disrespect to customer for not replying serious enquiry and complaints as such.
I would like to suggest the author that not just an article is enough. It should be taken further with powerful media and if possible take this case to the court for the sake of your friends who came from the same country.
I thank you so much for sharing it.
နှင်းနဲ့မာယာ December 2, 2011 at 12:40 AM
မမတို့ဆီက delivery system ကလဲ တော်တော်ဆိုးတယ်နော်...
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကဒ်အသစ်လျှောက်တာကို ဘဏ်က စာတိုက်ကနေ ပို့ပေးတယ်... ကာယကံရှင်မရှိတဲ့ အချိန်ကဒ်က ရောက်လာတော့ အခန်းဖော်က ယူပြီး သူ့ဟာသူ activate လုပ်ပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ သုံးပစ်လိုက်တယ်... စာတိုက်က နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ Bills တွေကိုလဲ ဖျောက်ပစ်သေးတယ်.. တော်တော်ကြာမှ သိပြီး အမှုဖြစ်ကြတာ ကြားဘူးတယ်......
credit ကဒ်တွေအတွက် security တော်တော် လိုနေပီနော်...
...အလင်းစက်များ December 2, 2011 at 2:16 AM
ကျနော်ကတော့ ဒီမှာ Banking System တွေနဲ့သိပ် သုံးစွဲတာ မဟုတ်တော့ သိပ် မသိလှဘူး အစ်မ သက်ဝေ။ အဲ ဒါပေသည့် တခါတရံ ဆိုင်တွေမှာ သွားစားလို့ငွေထုတ်မထားမိရင်တော့ ကဒ်ကိုပေးပြီး အလွယ်တကူ ရှင်းလိုက်မိတာပါပဲ။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကတော့ ပြောဖူးတယ်။ ကဒ်နောက်က နံပါတ် လေးလုံးကို လူတကာ အမြင် မခံစေနဲ့ဆိုလို့အဲ့လို လုပ်တဲ့ အကျင့်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ပါတယ်။ မောလ်တွေမှာ ၀ယ်တဲ့ ခါကျရင်တော့ ကဒ်ရှာမှာ ကိုယ်တိုင်ရှေ့ ဖြတ်တာမို့စိတ်ချရမယ် ထင်လို့ကဒ်နဲ့ ပဲ သုံးဖြစ်ပါတယ်။ Phone Linkage ယူထားလို့စိတ်ချရမယ်လို့ လဲ ထင်နေမိပါတယ်။
ခုလို ဆိုတော့လည်း သတိ ပို ထားရမှာပေါ့ဗျာ။
(အဟီး အကောင့်မှာလည်း ငွေ အများကြီး မရှိလှပါဘူးရယ်)
အင်ကြင်းသန့် December 2, 2011 at 12:49 PM
ဟင်....DBS က အဲလိုကြီးလား.... :(
ကုိုယ်လည်းဖြစ်ဘူးတယ်။ ကိုယ့်တုန်းက ကုိုယ်မသိခင် ဘဏ်ကသံသယဖြစ်ပြီး လှမ်းမေးတယ်။ ဒါနဲ့ ဘဏ်ကိုကိုယ်တုိုင်သွားလိုက်တယ်။ ဘဏ်ကတောင်းပန်စာလည်းပို့ တယ်။ ကဒ်သစ်လည်း ဖွင့်ပေးပြီး အဟောင်းကို ဖျက်ပစ်တယ်။ ငွေလည်းပြန်ထဲ့ပေးတယ်။ သိပ်တော့မများဘူး။ ၂၀၀ မပြည့်တပြည့်ဘဲ။ ကုိုယ်ကတော့ အေတီအမ် ကနေ ထုတ်ခံရတာ။ ID theft တွေကြောက်လို့ သတိအမြဲထားပေမဲ့ ဘယ်လိုခုိုးခံရတယ်ဆိုတာ မသိဘူး။ သူခုိုးတွေ အေတီအမ်စက်မှာကင်မရာတပ်ထားပြီး ခုိုးတာကို တီဗီမှာ ပြလို့ ကြည့်လိုက်ဘူးတယ်။ သတိထားရက်နဲ့ ပါသွားတာ။ ပြန်ရတော့တော်သေး
Kay December 2, 2011 at 4:18 PM
ဒီ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်...
တယောက်က.. ဂျက်စတား နဲ့ ရန်ဖြစ်
တယောက်က.. ဒီဘီအက်စ် နဲ့ အပြိုင်ကျဲ
မြသွေးနီ December 2, 2011 at 6:58 PM
ဒီမှာတော့ ဒါမျိုးဖြစ်ရန်အကြောင်းမရှိ..။ ခါးပိုက်နှိုက်က လွဲလို့ပေ့ါ...။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ December 4, 2011 at 2:17 AM
credit bill ထဲမှာ နာမယ်ကြီးအရယ်ဆိုင်တစ်ခုမှာ ဒေါ်လာ၄၀၀ကျော်ဖိုးအရက် ၀ယ်ထားတဲ့ bill.
ငါဘယ်တုန်းက သောက်တတ်သွားတာလဲ ဆိုပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရယ်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။
အပေါ်က မအေးအေးစန်းပြောတာ ဟုတ်တယ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားပြီး သုံးပါလေ့ဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်...
ZZZ December 5, 2011 at 11:00 AM
မသက်ဝေရေ ခရစ်ဒစ်ကဒ် သုံးတာ risk တော့ ရှိတာပေါ့ဗျာ၊ ဒါပေမဲ့လည်း ခရီးထွက်ခါနီး အွန်လိုင်းဟိုတယ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရရင်တော့ ခရစ်ဒစ်ကဒ်က သုံးတာအသုံးဝင်ပါတယ်၊ walk in ထက်စာရင် အွန်လိုင်းဘွတ်ကင်က ပိုဈေးသက်သာပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေ အရေးကြီးလို. မနက်ဖန်မနက်စောစော သွားမဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်အသုံးဝင်ပါတယ်၊ နိုင်ငံခြားကို အလည်အပတ်သွားရင် (မြန်မာပြည်ကလွဲ၍) ပိုက်ဆံအများကြီးထဲစရာ မလိုတာလဲ ခရစ်ဒက်ကဒ်က အသုံးဝင်လှ ပါတယ်၊ နေရာတိုင်းမှာတော့ အကောင်းနဲ.အဆိုး ဒွန်တွဲနေပါတယ်၊ လောလောဆယ်ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုပဲ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရုံလေးဆိုတော့ တစ်ခါတစ်လေ အသုံးအစွဲများပြီး bill လာမှတော့မှ မျက်လုံးပြူးရတဲ့အခါမျိုးတော့ရှိခဲ့ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ကတော့ ခရစ်ဒစ်ကဒ် fraud ထက် ကိုယ့်ဖာသာအသုံးအစွဲများမှာတစ်ခုပဲ စိုးရိမ်မိတယ်၊ တကယ်လို. fraud ကိုတစ်ဦး (သို.မဟုတ်)အဖွဲ.အစည်းတစ်ခုကလုပ်ခဲ့ရင် လည်း ပြန်ရနိုင်ပါတယ်၊ ကြားထဲမှာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာလေးတော့ရှိပါမယ်၊ လမ်းမှာ အမှိုက်တောင် လက်လွတ်စပယ်ပစ်ရင် အရေးယူတတ်တဲ့ ဥပေဒပြင်းထန်သော နိုင်ငံမှာနေ နေတာပဲ၊ သိပ်တော့လည်း အစိုးရိမ်မလွန်ပါနဲ.ဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ ဆက်ပြီး အသုံးပြုမယ်၊ အသုံးမပြုဖူးဆိုတာတော့ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ အခွင့်အရေးပါပဲ၊
တရားခံက Bank မဟုတ်ပါ။ Merchant ဖြစ်တဲ့ OCC ပါ။ Credit card ကို Online သုံးတဲ့အခါ Card ရဲ့ နောက်မှာ ရှိတဲ့ ဂဏန်းသုံးလုံးက Card နံပါတ်မလွဲရအောင်စစ်ပေးပါတယ်။ Credit card ကို offline သုံးတဲ့အခါ Card ပေါ်က လက်မှတ်နဲ့ Bill ပေါ်မှာ ထိုးတဲ့လက်မှတ် တူမတူ စစ်ဖို့က Merchant ရဲ့တာဝန်ပါ။ Card နံပါတ် မှားထည့်တယ်ဆိုတာကတော့ လုံးဝ ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာ ဆင်ခြေမဟုတ်ပါ။ Card တွေရဲ့ နောက်ဆုံး နံပါတ်ရှစ်လုံးက အစဉ်လိုက်ဖြစ်ပြီး အရှည်က ရှစ်လုံးက Bank အလိုက်ပေးထားတဲ့ နံပါတ်ပါ။ တုိုက်ဆိုင်တာ မဟုတ်ပါ။ ကျနော်သာဆို OCC ကို တောင်းပန်တဲ့ အထိ Complain လုပ်မှာပါ။ Bank Security နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါ။
မီယာ December 13, 2011 at 5:24 AM
ဘာမှ မလုံခြုံပါ အမရေ တခါတလေ ဖုန်းကနေတောင် ကဒ်နံပါတ် ပြောရသေးတာပဲ
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! December 13, 2011 at 6:17 AM
I haveablog too at http://www.sknyatino.blogspot.com about news in Russia
Mike January 30, 2012 at 8:57 PM